सन्दीप सम्मिलित दिल्लीले आइपिएल उपाधि जित्न सक्ने ४ आधार | Hamro Khelkud
एजेन्सी – इन्डियन प्रिमियर लिग (आइपिएल) को १३ औं संस्करण आगमी वैशाख पहिलो सातादेखि सुरु हुने कार्यक्रम छ । आइपिएल सुरुहुन एक महिना बाँकी रहँदा विश्वभर फैलि रहेको कारोना भाइरसको कारण कुनै पनि टोलीले आफ्नो तयारी थालेका छैनन् ।
चेन्नई सुपर किंग्सले प्रशिक्षण सुरु गरेपनि हाल स्थगित गरिसकेको छ । आइपिएल चैत्र १६ देखि हुने भनिएपनि कोरोना भाइरसको कारण वैशाख ३ सम्मलाई सारिएको छ । यस पटक नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने सम्मिलित दिल्ली क्यापिटल्सलाई उपाधिको प्रमुख दाबेदारको रुपमा हेरिएको छ ।
गतवर्ष दिल्लीले प्रतियोगिताभर उच्च प्रर्दशन गरेको थियो । तीव्र गतिका बलर कागिसो रबाडा अन्तिम समयमा चोटको कारण बाहिरिंदा दिल्लीलाई ठूलो धक्का पुगेको थियो । दोस्रो क्वालिफायरमा दिल्ली चेन्नईसँग ६ विकेटले पराजित हुँदा रबाडाको अभाव झल्किन्थो । यसपटक अक्सनमा दिल्लीले गत वर्ष भएको कमजोरीलाई मध्यनजर गर्दै अक्सनमा टोलीलाई आवश्यक खेलाडीनै अनुबन्ध गरेपछि उपाधि सम्भावना झनै बलियो बनेको छ ।
अक्सनमा दिल्लीले आक्रामक ब्याट्सम्यान शिम्रन हेटमायर, विकेटकिपर एलेक्स केरी र अलराउन्डर मार्कस स्टोइनिस जस्ता खेलाडी अनुबन्ध गर्दै उपाधिको दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ । दिल्ली सन् २००८ र २००९ मा सेमिफाइनल तथा २०१२ र २०१९ मा तेस्रो स्थानमा रहँदै बाहिरिएको थियो । दिल्ली अन्य सबै संस्करणमा लिग चरणबाटै बाहिरिएको छ । यस पटक भने दिल्ली पहिलो पटक फाइनलमा प्रवेश गर्दै उपाधि जित्न चाहन्छ । दिल्लीले पहिलो पटक उपाधि जित्न सक्ने यी ४ बलिया आधार पनि छन् ।
४. बलियो स्पिन अट्याक
गत वर्ष दिल्लीमा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने र अमित मिश्रा थिए । टोलीमा दुवै लेग स्पिनर हुँदा अफ स्पिनरको कमि रह्यो । यस पटक दिल्लीले किंग्स इलेभेन पञ्जावका कप्तान रविचन्द्रन आश्विनलाई अनुबन्ध गरेसँगै दिल्लीको स्पिन अट्याक मजबुत र सन्तुलन बनेको छ । अब लेग स्पिनर र अफ स्पिनरले दुवै तर्फबाट दबाब बनाउँदै विपक्षी ब्याट्सम्यानलाई निराश बनाउन सक्छन् ।
सन्दीप र मिश्राले पावर प्लेमा नयाँ बलले बलिङ गर्न सक्छन् । मध्यक्रममा आश्विनले आफ्नो अनुभवी प्रर्दशन गर्न सक्छन् । लगातार स्पिनर हाबी हुँदै विपक्षी ब्याट्सम्यानलाई सस्तैमा आउट गर्दै सहज जित पक्का गर्न सक्छन् । अर्कोतर्फ दिल्लीको घरेलु मैदान स्पिनर उपयोगी मानिन्छ । दिल्लीका स्पिनरले उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै उपाधि सपना पुरा गर्न सक्छन् ।
३. युवा खेलाडीको बाहुल्यता
दिल्ली केहि वर्ष यता युवा खेलाडीमा बढी केन्द्रित छ । दिल्लीका धेरै खेलाडी निरन्तर अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्दै उच्च प्रर्दशन गरि रहेका छन् । युवा खेलाडीको बाहुल्यता रहेको दिल्लीमा खेलाडीको फिटनेश, जोश र जागर पनि उत्कृष्ट देखिन्छ । जसको फाइदा दिल्लीलाई खेलको क्रममा फिल्डिङमा हुने छ ।
जितको लागि ब्याटिङ र बलिङ मात्र होइन फिल्डिङ, रणनिती, टिम एकता र कप्तानी पनि त्यतिकै राम्रो हुनुपर्छ । युवा खेलाडीले भरिएको हुँदा दिल्लीले फिल्डिङ मार्फत रन रोक्दै विपक्षीलाई दबाबमा राख्न सक्छ । अर्कोतर्फ दिल्लीको बलिङ, ब्याटिङ र फिल्डिङ सबै पक्ष्य सन्तुलित देखिन्छ । जसले उपाधिको दाबेदार देखाउँछ ।
२. उत्कृष्ट ओपनर जोडी
कुनै पनि टोलीलाई विशाल योगफल बनाउन ओपनरले उत्कृष्ट प्रर्दशन र सुरुवात दिनुपर्छ । टि२० इतिहासमा जतिपनि ठुलो योगफल बनेको छ । त्यसमा ओपनरको प्रर्दशन र साझेदारी उत्कृष्ट छ । ओपनरको खराब प्रर्दशनमा सुरुवातमै दबाब पर्ने हुँदा ठुलो योगफल विरलै बनेको छ । दिल्लीसँग उत्कृष्ट ओपनर जोडी छ । भारतीय युवा ओपनर पृथ्वी शा र शिखर धवन पहिलो रोजाइका ओपनर हुन् ।
गतवर्ष यी दुवैले राम्रो प्रर्दशन गरेका थिए । गतवर्ष पृथ्वीले १६ खेलमा ३ सय ५३ रन जोडेका थिए । भारतीय टोलीका पहिलो रोजाइका ओपनर समेत रहेका शिखरले १६ खेलमा ५ सय २१ रन जोड्दै सर्वाधिक रन जोड्ने सुचिमा शीर्ष चारमा रहेका थिए । पृथ्वीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दा धवनले टोलीको आवश्यकता अनुसार प्रर्दशन गर्ने गर्दछन् । यी दुबैले ठुलो इनिङ खेल्दै विशाल योगफल तयार पार्न सक्छन् । अर्कोतर्फ दुबै ओपनरले खराब प्रर्दशन गरेको खेण्डमा राम्रो विकल्प पनि छ ।
इंग्ल्यान्डका आक्रामक ओपनर जेसन रोय र पछिल्लो समय उत्कृष्ट लयमा रहेका अष्ट्रेलियाका अलराउन्डर मार्कस स्टोइनिस वैकल्पिक ओपनर हुन् । स्टोइनिसले दुई महिना अघि सम्पन्न बिग ब्यास लिगमा मेलबर्न स्टार्सबाट ओपनिङ गर्दै १७ खेलमा ७ सय ५ रन बनाउँदै शीर्ष स्थानका साथ सर्वोत्कृष्ट खेलाडी चुनिएका थिए ।
यसक्रममा उनले सिड्नी सिक्सर्सविरुद्ध ७९ बलमा १३ चौका र ८ छक्का सहित १ सय ४७ रनमा अविजित इनिङ खेल्दै इतिहास रचेका थिए । जुन बिग ब्यास इतिहासकै उच्च व्यक्तिगत प्रर्दशन हो । अर्कोतर्फ उनलाई यसै वर्ष घरेलु मैदानमा हुने टि२० विश्वकपमा टोलीमा स्थान बनाउन पनि उच्च प्रर्दशन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यद्यपी दिल्लीको आवश्यकता देख्दा स्टोइनिसले तल्लोक्रममा ब्याटिङ गर्ने सम्भावना बलियो छ ।
१. मजबुत ब्याटिङ लाइनअप
ब्याटिङ लाइनअप दिल्लीको सन्तुलन, मजबुत हुनुको साथै गहिराई छ । जुन च्याम्पियन टोलीको संकेत हो । ओपनरमा शिखर धवन, पृथ्वी शा, जेसन रोय र मार्कस स्टोइनिस छन् । यी चारै खेलाडीले उत्कृष्ट सुरुवात दिलाउनुको साथै ठुलो इनिङको लागि परिचित छन् । मध्यक्रममा अजिंक्या रहाने, कप्तान श्रेयस ऐर र विकेटकिपर ऋषभ पन्त छन् ।
पन्त चल्छन् भने उनलाई रोक्न मुश्किल पर्छ । उनले विश्फोटक ब्याटिङ गर्दै एक्लै र एकै ओभरमा जितको आधार तयगर्न सक्छन् । ऐरले पनि मध्यक्रममा उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । पन्तले गत वर्ष १६ खेलमा ४ सय ८८ र श्रेयसले ४ सय ६३ रन जोडेका थिए । अर्कोतर्फ पन्तलाई भारतीय टोलीमा टि२० विश्वकपमा स्थान बनाउन आइपिएलमा राम्रो प्रर्दशन गर्नु पर्ने दबाब थपिएको हुँदा जिम्मेवारीका साथ अझ उत्कृष्ट प्रर्दशन गर्ने अनुमान गरिएको छ । जसको फाइदा दिल्लीलाई हुने छ ।
गतवर्ष दिल्लीले उपाधि जित्न नसक्नुमा तल्लोक्रमको कमजोर ब्याटिङ एक कारण थियो । त्यसैले दिल्लीले यस पटक अक्सनमा वेस्ट इन्डिजका युवा ब्याट्सम्यान शिम्रन हेटमायरलाई ७ करोड ७५ लाख र अष्ट्रेलियाका विकेटकिपर एलेक्स केरीलाई २ करोड ४० लाख भारतीय रुपैयाँ खर्चेर अनुबन्ध गरेको थियो । हेटमायर र केरी दुबै उत्कृष्ट फिनिसिङ गर्ने गर्छन् । हेटमायरले वेस्ट इन्डिजबाट निरन्तर उत्कृृष्ट प्रर्दशन गर्दै आएका छन् । केरीले एकदिवसिय विश्वकपमा उत्कृष्ट फिनिसिङ गरेका थिए ।
स्टोइनिसले जुन सुकै स्थानमा ब्याटिङ गर्ने हुँदा अझ मझबुत बनेको छ । तल्लोक्रममा किमो पल, अक्षर पटेल, हर्षल पटेलले पनि ब्याटिङ राम्रो गर्ने हुँदा ब्याटिङमा गहिराई हुनुको साथै निकै मजबुत बनेको छ । जसले दिल्लीलाई उपाधिको दाबेदार टोली देखाउछ ।